Faysal Cali waraabe oo ka hadlay cilaaqaadkii ka dhaxeeyay Gaani Iyo fadeexadda ka haysata Kiiskii UFO | Somaliland.Org
Faysal Cali waraabe oo ka hadlay cilaaqaadkii ka dhaxeeyay Gaani Iyo fadeexadda ka haysata Kiiskii UFO
September 29, 2011	“Kiiska UFO waxaan ka soo galay Gaani ayay isyaqaaneen, waanay joogaan raggii NNS-ta ahaa”
Hargeysa (Somaliland.Org)- Guddoomiyaha Xisbiga mucaaridka ah ee UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa dafiray inuu basaasay dhalinyaradii iyo aqoonyahanadii reer Somaliland ee uu taliskii Siyaad barre xidhay horaantii sideetameeyadii, oo lagu eedeeyo inuu kaalin weyn ku lahaa xidhitaankii dhalinyaradaasi.
Faysal Cali Waraabe waxa kale oo uu ka gaabsaday inuu sharaxaad ka bixiyo xidhiidhkii uu la lahaa Taliyihii ciidamadii qeybta 26-aad ee Soomaaliya Maxamed Xaashi Gaani oo la soo wariyay inay wada shaqayn iyo saaxiibtinimo qoto dheeri ka dhaxaysay.
Guddoomiyaha UCID waxa uu maanta ka hadlay jawaabtii Madaxweyne Siilaanyo ka bixiyay hadalo deel qaaf ahaa oo uu Faysal maalmihii la soo dhaafay ku faafiyay qalabka warbaahinta.
Faysal Cali Waraabe oo wajigiisa ay ka muuqatay deganaansho la’aan waxa uu ka hadlay arrinta ururkii UFO waxaanu yidhi “Aniga wuxuu ceeb iiga dhigay Madaxweynuhu UFO ayuu basaasay, UFO kiiskeeda maxkamad ayaa la saaray, intaan Anigu ka soo galayna waxay ahayd Gaani(Taliyihii Ciidankii qehybta 26-aad ee Soomaaliya) ayay is yaqaaneen, maxkamad ayaa la saaray cidii la xidhiidhay waa la garanayaa. Ragii NNS-ta ahaa Cabdilaahi Cirro (Wasiirkii hore ee daakhiliga), Waran cade (wasiirkii hore ee duulista) way joogaan sharaftaan ku lahaa Somaliland iyo Soomaaliyaba waligay basaas la iguma sheegin.”
Previous PostXildhibaano ka tirsan Golaha Deegaanka Gabilay oo beeniyay inay dacwad u gudbiyeen maxkamada sareNext PostShirkii Beelaha Ciise Muuse oo ka furmay tuulada Dubur ee Degmada Sheekh	Blog